Kedu no mbụ-na-eme mgbe ị banyere n’ọfịs ahụ? El lelee ozi tanntanetị gị, nri? N’agbanyeghị naọbu otu n’ime no intaneti kachasịịhụrụ, envie e-mail para ka bụ otu ngwá ọrụ anyị na-eji kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ o na-eme ka ọ bụrụ ụzọ kachasị ike ma dị irè iji zụọ ahịa ndị ahịa gị.
N’ezie, dị ka ọtụtụ n’ime ndị ahịa ahịa kacha elu, email na-aga n’ihu superam mgbasa ozi mgbasa ozi na ọwa dị iche iche.
Ntak-a? N’ihi na ọ bụ onye – ig na-eruzi na igbe mbata nke onye ahịa gị.
Ọ na-agbanwekwa. E kwuwerị, ndị debanyere aha gị ndị gosipụtara mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Além do mais, o KeriLynn não permite que outros usuários saiam do meu ego, como também um email de lista. Taa, aga m aga n’ihu, na-akọwa ụzọ isi bulie e na-edebanye aha gị ụgwọ. Ndị ọzọ debanyere aha ha, ndị ọzọ na-atụgharị, ndị ọzọ ahịa.
Eu estava no meio … "Ee, duh".
Ma, y na-agba ya ugboro ugboro.
Ndekọ ozi email gị dị mma dịka ọdịnaya ị na-emepụta. Ị gaghị ekwenye e debanyere aha iji nyefee adoraị ozi-e ha n’enweghị ịfụ ha na nnukwu ọdịnaya. Maịgaghị edebe tem na lista gị ma ọ bụrụ na wegnweghị iwepụta ozi gị jupụtara na bara uru. Nzọụkwụ otu na-eweta no nd-ama ama, ime ihe, na-akụzi, ma na-agwa e ndị ọbịa gị. Mgbe ah email, mgbe ị na-arịọ maka email ha, ha ga-enwe obi ụtọ ime otú ahụ.
Ara maara okwu a ‘ọ dị ntakịrị karịa’? N’ihe banyere ụdị ndebanye aha email, chefuo ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka nnukwu idei mmiri nke e debanyere aha, ị ga-ebuwanye ibu ọnụ ọgụgụ gị. N’ezie, enzere ezigbo akara ịchọta – ị chọghị imejọ ndị ọbịa gị.
Ndịkachamara na Buffer na agba ọsọ agbakwunye ụdị mpempe akwụkwọ email ọhụrụ itoolu ha na saịtị. Nsonazụ ahụ? Ha ejiri okpukpu abụọ tinye ọnụ ọgụgụ ha n’ime ọnwa.
Ihe ha-ekpo ekpuchi bụ ‘HelloBar’- ụdị mpempe akwụkwọ nke-ekpuchi na elu nke ebe nrụọrụ weebụ ha – na’ Slideup ‘- igbe ntinye nke gosipụtara mgbe onye ọbịa bịara karịa. Ndị ọzọ nhọrọ ndị mmadụ debanyere aka, otú ahụ ka ou yikarịrị ka ha ga-eme ya.
Ugbu a, em na-emechi no gbasara ya no mkpali. Ịbanye maka akwụkwọ akụkọ bụ mgbanwe. Ndị ọbịa gị chọrọ no nloghachi. Sim, nye ha ihe ha-a-apụghị iguzogide! Se você está procurando um nome de usuário ou não: ebook, akwọkwọ edemede dados na nch npụta, ikpe na-enweghị n’efu, akwụkwọ ma ọ bụ broshuọ. Otú ọ dị, e já não havia outro ímã em n-ebugharị elu ma dị elu: ọdịnaya nweta nkwalite ‘. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa ma dị mkpa nke na-agbakwụnye uru nke blọọgụ gị dị.
N’ịbụ onye um kwadoro dịka ‘ego zuru oke’, nkwalite ọdịnaya e nk a kapịrị ụnụ, nke na-enye nd-na-agụ akwụkwọ ngwa ngwa. Ndepụta ndebanye na-arụrụ nke ọma, ma jiri echiche gị, mepụta ihe dị mkpa nke a kapịrị ọnụ na ọdịnaya gị. Wee tinye ya n’ime blọọgụ kachasị ewu ewu gị.
Nkpọkọta gị nwere ike ime maọbụ mebie mgbasa ozi ndenye aha gị. Nke a bụ bọtịnụ ‘denye aha’ gị. Ọ bụ nzọụkwụ ikpeazụ. Ị ghaghị ime ka ndị na-agụ akwụkwọ gị nwee mmetụta ịmanye ya na ya. Entre os seguintes: agba, ntinye, na i naomi. N’ihi na agba, elu, amarelos, laranjas na-arụrọ nke kema. Ha na-eji obi ike, na-adọrọ anya, ma dọta uche gị. I nwere ike ịga otu nzọụkwụ n’ihu ma mee ka ya na mmekọrịta. Nke a – ma ọ bụ akwụkwọ ochie – CTA bụ ezigbo ihe nlereanya. Site no site do agbanwe na-acha uhie uhie na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụrụ na e kpuchiri ya – na-eme ka onye ụrụ ahụ gaa!
Banyere akwụkwọ ahụ, mee ka ọ dị mkpụmkpụ, nkọ, na isi. Ụfọdụ ndị ahịa na achọpụtala na iji ‘akpa’ mmadụ-na-arụrụ nke ọma ebe a. GIF está disponível no atụ pazọ dị mkpa: "Nye m akụkọ efu ugbu a!" Karịa "ibudata akụkọ free". Ou não, okwu ndị ọbịa gị.
Nabụna na ndụmọdụ ndị a dị egwu, e nwere o na-ejide ndị ọbịa gị: egwu.
Há um echegbu on-line que inclui um e-mail adicional. Ha na-egwu nwere ike iziga ha spam nakwụkwọ ozi. Ọ bụrụ na ha bụ onye ọbịa ọhụrụ, ha na-echegbu onwe ha n’ihi na ha anụtụbeghị banyere gị. Igbu oge ahụ adịghị mfe, mana estava aqui como eu. O site de malita não inclui ha ga-enweta mgbe ha debara aha ha. Buru uzo na imeghe. Ụgha ọzọ na-eji ‘no akaebe mmadụ’ gosi ha na ndịzọ na-atụkwasị gị obi. Nke a bụ ihe atụ dị mfe nke jikọtara usoro abụọ a:
E nwere the akaebe mmadụ na n’elu (‘soro 31.012 ndịzọ dị egwu!’) Mgbe ahụ, e ndepụta ntụgharị nke kpọmkwem no site nwetara na ịdebanye aha. Onye ọzọ na-atụ egwu egwu na echetara e debanyere aha gị na ị akpọkwa spam kwa, nakwa na ịgaghị eso onye ọ bọla ọzọ kerịta nkọwa ha.
O mgbochi ikpeazụ iji debanye aha bụdị ntinye akwụkwọ dị mgbagwoju anya na ogologo. Ụdị o odide gị adịghị mkpa ịjụ maka aha nwa agbọghọnne gị na-agụ. Ọbụna ị chọghị ebe ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ. Mee kaọdịfe. Mee ya ngwa ngwa. Ekwela ka ha nwee ohere igbanwe obi ha.
Maka weebụsaịtị ụfọdụ, ịrịọ maka aha mbụ bụ echiche bara uru. Ọ pụtara nwere ike ịza nd-agụ akwụkwọ gị n’onwe gị e-mail n’onwe ya – nke na-emekarị ka mma ọnụego. Ma dọghịhe ịzọ achọrọ! Ọ ụ ị ị—-ọ ọ ọ w w w w w w w w w,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,———ha-ha ha ha ha Ọnụ ọzọ na-eme ka ndịbịa gị ghara ịbanye gaa na ibe ọzọ iji banye. O kwesịrị ịdị mfe dị ka:
Emere ya n’ụzọ ziri ezi, ị ga-enwe ikwenye ma gbanwee na nanị sekọnd ole nole. Ọ n n n email email email n e email email email email ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ t t t t t t Cheta na, ndị ọzọ ị debanyere aha, ị ga-enwekwu em qualquer outro lugar do ego. Ego dị na ndepụta! Olee aghụghọ na usoro ịchọtara dị irè maka ịba ụba nọmba gị?